B2B Yemagariro Midhiya Tsika
10 Yemagariro Midhiya Maitiro eB2B Kushambadzira
Muvhuro, Zvita 6, 2010 Svondo, October 19, 2014 Douglas Karr
MunaAgasti, Softchoice vakatumira ongororo kune vatengi vavo uye vakagamuchira 1,444 vakapedza mhinduro dzinomiririra anopfuura 1,200 mabhizinesi madiki nepakati nepakati (SMB), bhizinesi, chikamu cheveruzhinji nemasangano edzidzo. 71% yevakabvunzwa vaive muIT uye muyenzaniso yaive 50 muzana yeUS uye 50 muzana masangano eCanada - saka akamiririra nzvimbo yeNorth American bhizinesi.
Chimwe chinhu chehurukuro chinofanirwa kuchema ndiko kumiririra kweWordle kwemashoko acho: Zvinokosha uye nenguva izvo zvinoda kutora kufarira uye be zvakanyorwa muchidimbu!
Heano mamwe maonero kubva pane zvakawanikwa:
Tags: b2bb2b kushambadziradzidzobhizinesi rebhizinesiitMari Smithbhizimusi repakati nepakatiMTB Radiochikamu chevanhuUkama KushambadziraBhizinesi dukusmbnyorotsvakurudzotsvaga yekuongorora
Aa, heki. Ndinofungidzira ndichatanga bhizinesi rekushambadzira!